हाम्रो पहुँचले ब्यबहारिक शिक्षामा जोड दिन्छ ( अन्तर्वार्ता ) - Tulsipur Online
हाम्रो पहुँचले ब्यबहारिक शिक्षामा जोड दिन्छ ( अन्तर्वार्ता )
Posted by News Desk | २९ बैशाख २०७६, आईतवार २०:४२ |
२९ वैशाख/पछिल्लो समय विद्यालहरुमा आदर , संस्कार र व्यवहार हराउँदै गएको छ । विद्यार्थीहरु इमेल इन्टरनेटमा तल्लिन भएको अधिकांश अभिभावकहरुको गुनासो रहेको छ ।
तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ७ स्थित हाम्रो पहुँच सेकेन्डरी स्कुलले भने ब्यबहारिक शिक्षामा जोड दिदै आएको छ ।
बिद्यार्थीमा किताबी ज्ञान मात्र नभई ब्यबहारिक शिक्षा पनि आबश्यक रहेको भन्दै यो अभ्यास थालिएको बिद्यालयको भनाई छ ।
यस्तै बिषयबस्तुमा रहेर हामीले सोही विद्यालयका प्रिन्सिपल एवम् हाम्रो पहुँच बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका कार्यवहाक व्यवस्थापक डिआर भण्डारीसंग हामीले कुराकानी गरेका छौं ।– सम्पादक
हाम्रो पहुँच सेकेन्डरी स्कुलमा अन्य बिद्यालय भन्दा के फरक छ ?
तपाईलाई पनि ज्ञान होला यो विद्यालय हाम्रो पहुँच वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको लगानीमा सञ्चालन भएको विद्यालय हो । हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई सैद्धान्तिक शिक्षा संगसंगै व्यवहारिक शिक्षा पनि दिदै आएका छौं ।
साथै विद्यार्थीहरुको व्यवहार, अनुशासन र उनीहरुमा संस्कार सिकाउनलाई सुक्ष्म अध्यनकासाथ योजना वनाएका छौं र सोहि अनुसार विद्यार्थीलाई डोर्याउने जमार्को गरेका छौं । हामीले विद्यालयमा जतीपनि काम गरेका छौं विद्यार्थी केन्द्रित भएर गरेका छौ सायद यीनै कारणले होला ।
विद्यार्थीको उपस्थिती कस्तो छ ?
हाम्रो भौतिक पुर्वाधार थपिएको भए हामी संगै अझ धेरै विद्यार्थी हुने थिए । यस वर्ष हामीले हामीसंग जति कक्षा कोठा छन त्यति मात्रै विद्यार्थी राखेका छौ र त्यसै अनुसार सेक्सन छुट्टाएर व्यवस्थीत पठन पाठन गरेका छौ ।
कक्षा कोठाको क्षमता भन्दा धेरै विद्यार्थी भयो भने उहाहरुलाई निकै दुखका साथ यस वर्ष सिट पुगेन फेरि अर्को वर्ष आउनुहोला है भनेर फर्काउनु पर्ने अवस्था भएको छ ।
निजि बिद्यालयमा शूल्क महंगो हुन्छ, भन्ने गुनासो छ , तपाईकोमा के छ ?
विल्कुल होइन , त्यस्तो कहाँहुन्छ ? शुल्क मात्रै सस्तो भएर हुने भए त शुल्क नै नलाग्ने थुपै्र सामुदायिक विद्यालयहरु छन त । यी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरु नभएर विद्यालय वन्द गर्नुपर्ने भो, या गाभिनु पर्ने भो भन्ने खवर दिन प्रतिदिन किन सुन्नु परिरहेको छ त ? त्यस्तो किन सुन्नु परिराछ त ? त्यस्तो त सुन्नु नपर्ने होनी , हाईन र ? त्यसकारण शुल्क सस्तो भएर विद्यार्थी धेरै हुन्छ भन्ने कुरागर्नु त्यति बैज्ञानिक हुदैन जस्तो लाग्छ मलाई ।
हाम्रो पहुँचमै बिद्यार्थीका आकर्षण बढ्नु पर्ने कारण के छन् ?
कारण धेरै छन । विद्यार्थीलाई संस्कार सहितको व्यवहारिक शिक्षा दिएका छौं , विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरुलाई अन्य धेरै सुविधा पनि दिएका छौं।
राम्रो व्यवस्थित सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना वनाएका छौं । वाटर प्लान्ट गरेर फिल्टर गरिएको पिउने पानी (एगचभ मचष्लपष्लन धबतभच)को व्यवस्था गरेका छौं । यसका साथसाथै विद्यार्थीको पठनपाठनमा गुणस्तरता दिएका छौं ।
पढाइमा गुणस्तरता भएन भने केहि काम छैन त्यसैले हामिले सर्वशुलभ् शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि हामी केही गरौं -(“Let’s do something for quality education”) भन्ने नारानै वनाएका छौं र यसैलाई आत्मासाथ गरेका छौं । साथै हामीले जे गर्छौ त्यो मात्रै भन्छौ त्यसैले अभिभावकको मन जित्न सफल भएका छौं । ईत्यादि कुराहरु हुन सक्छन ।
व्यवहारिक शिक्षा भन्नाले ?
विद्यार्थी वावुनानीहरुले अध्ययन गरेको कुरालाई व्यवहारमा लैजानु प्रयोगमा ल्याउनु नै हो ।
त्यस्तो के गर्नु भा छ र ?
हामीले हाम्रो पहुँचको नाउँमा विद्यालय स्थापना गरे देखि नै विद्यार्थीको कोर्ष र उनीहरुको दैनिक जीवनमा उपयोग हुने कुरालाई ध्यानमा राखेर उनीहरुको स्वास्थ्य शिक्षा, पूर्व व्यवसायिक शिक्षा , नैतिक शिक्षा , विज्ञान शिक्षा लगाएतका विषयहरु अनि दैनिक जीवनपयोगी कुराहरु सिकाएका छौं । यस वर्ष हामीले व्यवहारिक शिक्षाको लागि अलग्गै पाठ्यक्रम बनाएर लैजाने योजना पनि बनाएका छौं ।
तपाई त संस्थाको पनि का. वा व्यवस्थापक हुनुहुन्छ , संस्थामा थुप्रै कर्मचारी भैसक्नु भएको छ । तपाई कर्मचारीहरुकै प्रमुख भएको नाताले वताइ दिनुस न संस्थामा कर्मचारी सञ्चालनमा के कुरामा ध्यान दिनु पर्ने रैछ ?
कर्मचारी जो जस्तो भएपनि त्यसले संस्थाको निति , विधि र प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्नु पर्छ । संस्थाको नियम भन्दा वाहिर गएर काम गर्यो भने कर्मचारी अनुशासन विहिन हुन्छ । हामी कर्मचारीको अनुशासनलाई निकै ध्यान दिएका छौं। संस्थाको साधारण सभाले पारित गरेको कर्मचारी सञ्चालन कार्य विधिलाई अंगालेर काम गरिएको छ ।
कार्य विधिमा हायर एण्ड फाएर, पुरस्कार र दण्ड सवै कुरा भएको हुँदा कामगर्न सजिलो भएको छ । त्यसै कार्य विधि अनुसार नै चैन अफ कमाण्ड गराएर काम गरेका छौं । हामी संग सवै कर्मचारी अनुशासित हुनुहुन्छ । वफादार हुनुहुन्छ । अनुशासनमा नभएको कर्मचारी आफै पाखा लाग्नु हुन्छ । हामीले कि गर्नु पर्दैन ।
आउँदा दिनहरुमा संस्था र संस्था अन्तरगतका परियोजनालाई कसरी लैजाने योजना वनाउनु भएको छ ?
संस्थामा थप नयाँ परियोजना ल्याउने जमर्को गरेका छौं । हामीले अव छिट्टै नयाँ परियोजनाको रुपमा डेरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदै छौं । विद्यालयमा नयाँ प्रविधि ल्याउँदै छौं ।
रेडियोमा थप नयाँ खोजमूलक , सन्देशमुलक , मनोरञ्जनात्मक तथा कमेडी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने योजना वनाएका छौं । समग्रमा भन्दा संस्थालाई नयाँ स्वरुपले लैजाने योजना भएको छ ।
Previousदाङमा चितुवाको छाला सहित तीनजना पक्राउ
Nextबालबालिकाकालागि नेतृत्व विकास तालिम